Lalela futhi Uqondise Amathuba ku-Twitter nge-SocialCentiv | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 23, 2015 NgoLwesithathu, Septemba 2, 2015 Douglas Karr
Nsuku zonke, abasebenzisi be-Twitter abayizigidi ezingama-230 bathumela amaTweets angaphezu kwezigidi ezingama-500. Ngokusetha okulungile kwamagama angukhiye, amabhizinisi angahlela amakhasimende endawo. Ubuqili ukuqonda ukuthi yimaphi amagama asemqoka asebenzayo nokuthi izingxoxo zenzeka kanjani ku-Twitter. Komphakathi ikhomba abathengi abathumela izinhloso zabo kumkhiqizo, isevisi, noma okuqukethwe okuhlobene nebhizinisi lakho. Ngemuva kwalokho ungabonisa abangaba ngamakhasimende ngenhloso yokukhuthaza, eyenziwe ngezifiso eyenzelwe ukuthonya isinqumo sabo sokuthenga.
Ngesikhathi sonyaka we-2014 National Football League, abalandeli abacishe babe yizigidi ezinhlanu babhala ngeThimba ngeqembu labo abalithandayo. Futhi kubakhangisi bezemidlalo, lawo ngamathuba wokuthengisa ngamanye ayizigidi ezi-5. Isibonelo, ekuqaleni kuka-5 walokho kwakumayelana neHouston Texans, njengale engenhla evela ku- @Mr_Polo. Lawa maTweets anikeza abathengisi bezemidlalo ithuba elihle lokuphendula ngqo kumlandeli ngezaphulelo nokunikezwayo kumathikithi nasezintweni zabalandeli.
Ukukhetha inhlanganisela efanele yamagama asemqoka kubalulekile emkhankasweni wokumaketha ukuze uphumelele kule nkundla yezenhlalo. Ngoba i-Twitter ivumela ukuqonda okungenakuqhathaniswa emizweni yabantu ngesikhathi esithile, abathengisi kumele bacwaninge ukuthi abathengi bayisebenzisa kanjani i-Twitter futhi bakhe amagama abo asemqoka ngokufanele. UBernard Perrine, isikhulu esiphezulu se- Komphakathi
Enza ngendlela oyifisayo Umkhankaso Wakho - Hlela umkhankaso wakho ngamagama angukhiye nesikhuthazo sokusiza ibhizinisi lakho likhule.
Yonga Isikhathi Nemali - Thola amaTweets afanele ukuze ukwazi ukuzibandakanya ezingxoxweni zangempela nabantu bangempela ngesikhathi sangempela ngolwazi abalufunayo lapho belufuna.
Ukufunda Okuthuthukile - Njalo uma uphendula kuTwitter, iSocialCentiv ifunda futhi ikhumbule ukuthi iziphi izinhlobo zamaTweets ezihambisana kakhulu nebhizinisi lakho.
Targeting Geographic - Finyelela abathengi abafanele ngokunemba okukhulu ngokukhomba amaTweets endawo.
Ukuqwashiswa kweBrithani - Zibandakanye nabathengi abangaba khona, ubazise ibhizinisi lakho.
Ukusebenzisana Okusheshayo - “Phendula kabusha” khona manjalo, “landela”, “intandokazi”, nokuthi “phendula” kubathengi abangaba khona.
Izibalo ezibukhali - Qhathanisa izingxoxo ze-Twitter namakhasimende usebenzisa ukubuka konke okucacile, kwenyanga nenyanga bese wenza isenzo ngokuya ngalokho okufundayo.
Izimpendulo Eziphakanyisiwe - Isoftware inikeza izimpendulo eziphakanyisiwe zababhalisile ukuxhumana nabathengi abangaba khona ngokushesha okukhulu futhi kalula.
Ukusekela okubukhoma - Xoxa nabasebenzi bethu bokusekela noma kunini lapho unombuzo usebenzisa uhlelo lweSocialCentiv.
Ukuhlanganiswa kwe-MailChimp - Gcina ubudlelwane bakho namakhasimende ngokuhlanganiswa kwethu okwakhelwe ngaphakathi ne-MailChimp okungenisa ngokuzenzakalela imininingwane yokuxhumana kwamakhasimende ngqo kusuka kuSocialCentiv.
Ngokusetha okulungile kwamagama asemqoka, abathengisi bezemidlalo bangathola amakhasimende endawo kuTwitters - ngesilinganiso sokuqinisekisa esingu-50%! Ubuqili ukuqonda ukuthi yimaphi amagama angukhiye asebenzayo nokuthi izingxoxo zenzeka kanjani ku-Twitter. ISocialCentiv ikhomba abathengi abaTweet izinhloso zabo maqondana nomkhiqizo, insizakalo, noma okuqukethwe okuhlobene nebhizinisi lakho. Ngemuva kwalokho ungabonisa abangaba ngamakhasimende ngenhloso yokukhuthaza, eyenziwe ngezifiso eyenzelwe ukuthonya isinqumo sabo sokuthenga.
Sinikeza izinsizakalo eziphethwe, lapho iSocialCentiv iphatha ukufinyelela nokulandelela abalandeli ku-Twitter, kanye nohlobo lokuzenzela izinkampani ezithanda ukuzinakekela zona ngokwazo. Kunoma ikuphi, amakhasimende ethu athola ithuluzi elinamandla kodwa elingabizi kakhulu elibasiza ukuthi bafinyelele abathengi ngemilayezo yokumaketha okwamanje labo bantu bakwamukela kakhulu ukuyithola. UBernard Perrine, isikhulu esiphezulu seSocialCentiv
Isibonelo, abalandeli abacishe babe yizigidi ezingama-25 abathumele ku-Twitter ngamathimba abo abawathandayo ngonyaka owedlule. Ngayinye yalezi zingumholi othunjiwe, omele umlandeli ocabanga ngezemidlalo futhi angakhuthazeka ukuthenga amathikithi, noma ikepisi leqembu noma ihembe, noma afake ama-sweepstake. Komphakathi idonsela lawo ma-tweets kwisifunzo sokusakaza lapho iqembu lingakwazi khona “@” ukuphendula ngqo ku-Tweet ngesaphulelo "ukugudluza" ukuze lithenge:
@NFLfan, sikanye nawe - isizini yebhola ayikwazi ukuqala maduze. Ukuze uqiniseke ukuthi uyilungele i-tailgate yakho yokuqala, kuthiwani ngo-15% wesephulelo esitolo sethu sabalandeli? Chofoza lapha ukuthola okunikezwayo.
ISocialCentiv imemezela ukuthi izuze izinga lokukhula ngamaphesenti angama-80 ebhizinisini layo lokumaketha ezemidlalo. Inkampani ikholelwa ukuthi imbuyiselo ekutshalweni kwemali iyimbangela yokukhula. Kwamanye amaklayenti, iSocialCentiv ine-CPC engaphansi kwe- $ 1 futhi izuze i-CTR engamaphesenti angama-42 - 52 ebhizinisini lokumaketha ezemidlalo. Ngokuya ku-ROI, ababhalisile babona amaphesenti aphakathi kwama-34 ezaphulelo ezilandiwe alandiwe ukuze ikhasimende likwazi ukuhlenga okunikezwayo.
Qaphela: Siyinhlangano ephethwe yi Komphakathi.
Tags: nflisikhungo senhlaloukulalela komphakathiukunikezwa komphakathisocialcentivizikhuthazo ze-twitterukulalela kwe-twitterUkunikezwa kwe-twitter
Mar 25, 2015 ku-5: 15 AM
Sihlala silandela isibuyekezo esisha esivela kule nethiwekhi yokuxhumana nabantu, ikakhulukazi ukuthola ithuba kanye nangenhloso yokukhangisa sisebenzisa le nkundla yokuxhumana.